Barashada luuqadda SFI iyo xirfadda oo suurtageliya helitaanka shaqo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Barashada luuqadda SFI iyo xirfadda oo suurtageliya helitaanka shaqo
La daabacay tisdag 4 juni 2013 kl 16.29
Afka anigoon aqoon ayaan imid oo aan xirfad iyo afba ku bartay
Ardeyda SFI ee dugsiga sare Tingvalla. Sawirle: Carina Olsson
Suurtagalka helitaanka shaqo ayaa uga wanaag-san kolka ajaaniibtu ku baraneyaan xirfadda muddada ey dhiganeyaan luuqadda iswiidhishka nidaamka lagu magacaabo SFI. Middaasi ayay ka muuqatay qorshe guul lagu gaarey oo ey iska kaashadeen dhammaan maamullada iskuullada SFI ee luuqadda iswiidhishka lagu barto, hoggaan-goboleedka iyo xafiiska shaqada:
- Waa inaad marka hore ku dadaashaa sidaad luuqadda isaga giijin lahayd, dabadeed inaad ka fekerto waxaad jeceshahay, maadama ey jiraan xirfado dhafsiisan cunno-kariye iyo alxame oo la yeelan karo, sida matalan kalkaaliye shakhsi, ganacsi, shaqaalaha duurka, kalkaaliye caafimaad hoose iyo wixii la mid ah.
Waana mid aan suurtagal ahayn haddii aadan luuqadda aqoon u lahayn., sida uu sheegay Efrem Essayas oo wax ka dhiga goobta tababarka xirfadda alxanka oo uu muddo ay iminka ka soo wareegtay dhow-sannadood wax ka baran jiray isaga qudhiisu.
Dhowr toddobaad ka hor ayey saddex wasiir booqasho ugu tageen goob ey ku sugnaayeen ajaaniibta dhigata xirfadda cunno-karinta oo uu ka dambeeyay hoggaanka maamulka gobolka Gävleborg iyo isku dhex wadidda barashada afka iswiidhishka SFI iyo barashada macluumaadka xirfadaha.
Suurtagal ballaaran ayey leeyihiin dadyoowgan dhigta xirfadaha kala duwan iyo sidii ey shaqa ku heli lahaayeen. Iyadoona ey 70% shaqa ku heleen kolkii ey tacliinta dhammeeysteen.
Marcus Nilsson ayaa ah hagaha qorshahan ajaaniibtu ey isku dhex wadaan luuqadda iyo barashada xirfadaha kala duwan:
- Waa midda u sahleeysa in shakhsigu uu aad diyaar ugu yahay suuqa shaqada. Midda sahlaysa inuu si dhakhsi ah uu qeyb uga noqdo suuqa shaqada, sida uu sheegay.
Ulf Nordin, wuxuu ka mid yahay macallimmiinta wax u dhigta ardeyda barata xirfadda alxanka, isagoona sheegay in barashada luuqadda aanay ahayn oo keliya in la barto macnaha ereyga, hase yeeshee loo baahan yahay barashada ey ereyadu ku sameeyneyaan weedha guud ahaan:
- Waxaa la akhriyaa jumlad, waa in marka la fahmaa macnaha weedha oo dhan ee aan la fahmin oo keliya erayga. Waa xeeyn-daabka ugu wayn ee hor-yaala sidii ey uga gudbi lahaayeen wiilasha iyo gabdhaha dhigta xirfaddan, sida uu sheegay.
Daahir Xuseen oo ka mid ah ardeyda barata alxanka ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya. Daahir Xuseen wuxuu dalka ku dhaqnaa muddo sannad gaarsiisan, isagoona iminka ku hoowlan sidii uu shaqo ku heli lahaa kolka uu dhameeysto xirfaddiisa:
- Kolkii aan halka imid kuma aanan hadli karin luuqadda iswiidhishka, ma aanan akhrisan karin aragtida alxanka, barashada luuqadda iswiidhishka ee SFI aad ayay nooga caawintay middaa.